Sida loo maalgaliyo Fifa - BBC News Somali
Sida loo maalgaliyo Fifa
Fifa, oo maamusha kubadda cagta adduunka, ayaa Maraykanka iyo xukuumadda Switzerland ay baarayaan eedo la xiriira musuqmaasuq. Afar iyo toban qof oo ay ku jiraan saraakiil sare ayaa lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo lacag qaadasho lagu qiyaasay in ka badan $150m (£97m) in ka badan muddo 24-sno ah.
Sidee ayay hay'adda fadhigeedu yahay Zurich u heshaa dhowrka bilyan ee lacagta giniga ah u heshaa, maxayse ku bixisaa?
Lacag ka samaynta Koobka Adduunka
Koobka adduunka ayaa ah cayaaraha duniga lacagta ugu badan laga helo, waxaa uu ka sareeyaa xitaa Olimbikada. Wareegyadii u soo bixitaanka sanadkii 2014 iyo tartamadii ugu dambeeyay waxaa laga helay $4.8bn (£3.1bn) ka badan muddo afar sano ah, kadib markii qarashyada xisaabta lagu daray, Fifa waxay faa'iiday ka badan $2bn.
Lacagtaas $4.8bn, oo soo gashay koobkii adduunka 2014 dhowr, ayaa loo qaybin karaa:
Fifa ayaa dib ugu maalgalisa inta badan daqliga soo gala, balse waxay kaloo kaydisaa in badan oo ka mid ah faa'iidada.
Qiimaha kaydka ayaa xoog u kordhay tobankii sano ee ugu dambaysay $350m (£228.6m) ayuu ahaa 2005 wuxuuna gaaray ka badan $1.5bn (£1bn) sanadkii 2014.
Waaxda dacwad soo oogidda Maraykanka, ayaa soo jeedisay eedo ah in in ka badan $150m (£97m) la musuqmaasuaqay 20-kii sano ee la soo dhaafay. Waxay lacagtan u dhigantaa ilaa 10% lacagta Fifa ugu talogashay xaaladaha deg dega ah.